Onye mmeri nke Agent Agent Education: Sandals Resorts Executive Gordy Silverman Passes
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Onye mmeri nke Agent Agent Education: Sandals Resorts Executive Gordy Silverman Passes
Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Gordy Silverman gafere
Gordy Silverman, Onye isi nchịkwa nke Mmụta Mmepụta na Unique Vacations Inc. (UVI) na onye na-akwado ogologo oge maka agụmakwụkwọ onye na-ahụ maka njem bụ onye nyere aka wulite mmemme Sandals Resorts 'Certified Sandals Specialist (CSS), nwụrụ na Julaị 24 na-esote obere ọgụ ya na ọrịa kansa. Ọ dị afọ 64.
Silverman bụ onye mmeri nke ndị nnọchi anya njem, na -esonyere Unique Vacations Inc., Snadals Resorts na Beaches Resorts affiliate, na 1987.
N'oge na -adịghị anya ọ ghọrọ ọnụnọ UVI's West Coast.
Nrara Gordy raara ụlọ ọrụ ahụ na ihe ọmụma ụlọ ọrụ njem mere ka UVI nwee ihe ịga nke ọma.
Silverman sonyeere Unique Vacations Inc. (UVI), onye nnọchite anya onye nnọchi anya ụwa niile nke Sandals Resorts na Beach Resorts na 1987, dị ka onye isi oche onye isi oche UVI nke Mmekọrịta Ahịa & Mmekọrịta Gary Sadler wee guzobe onwe ya ngwa ngwa dị ka onye mmeri dị elu nke ndị nnọchi anya njem. Ọ malitere n'ọfịs Miami nke UVI mana mechara mebe ọnụnọ UVI West Coast. “Nrara ogologo oge Gordy raara ụlọ ọrụ ahụ na ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ njem mere ka anyị nwee ihe ịga nke ọma. Ọ ga -ewute ya nke ukwuu, "Sadler kwuru.
Ọ gbakwụnyere, "Enwere ike ịkọwa Gordy dị ka 'nne nke ndị nkuzi niile' na ụlọ ọrụ njem. Ọ na -etinye aka na akụkụ ọ bụla nke ọzụzụ ire ahịa nke ụlọ ọrụ anyị site na BDM ọhụrụ anyị goro ọrụ na ụlọ ọrụ njem njem sara mbara. Gordy mepụtara nke ọma wee bido asambodo anyị akpụkpọ ụkwụ Mmemme ọkachamara. N'ime ihe karịrị afọ 25, ọ bụ onye na -anya ụgbọ ala na CSS Workshops, na -eme ka ozi ahịa na ọzụzụ dị ọhụrụ ma dị mkpa maka ndị ndụmọdụ njem n'afọ na n'afọ. Ọ tụpụtakwara echiche 'mgbakọ' ewu ewu anyị, ihe omume na -enye ihe ọmụma ma na -atọ ụtọ nke zụrụ puku kwuru puku ndị ndụmọdụ njem na ndị mmekọ ụlọ ọrụ n'ofe North America na gburugburu ụwa. Akpụkpọ ụkwụ Sand & Resorts… N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Gordy wuru ụkpụrụ na ntọala maka ọzụzụ ezumike ụwa pụrụ iche nke mụ na ndị otu m ji nganga guzoro taa. Maka nke ahụ, anyị niile ji ya ụgwọ ebighi ebi. ”
A na -akpọ ndị ndụmọdụ njem na ndị enyi ụlọ ọrụ ka ha tinye echiche na ncheta Gordy na Sandal Memory Jar nke enyi Gordy na onye ọrụ ibe UVI, Maura Cecere guzobere na [email protected] .